सिस्नो खानुका यस्ता छन् फाइदै फाईदा : हेर्नुहोस्….
October 29, 2020 641
सिस्नो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थ’का लागि पनि उ’तिकै फाइदा जनक मानि’न्छ । सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ यसमा धेरै किसिमको प्रोटि हरु पाइन्छ् सिस्नोमा फलाम आइरन , पोटासियम, क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी र डी जस्ता पौष्टि’क तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
यसमा रहेको औष:धि गुण र प्रभावका:रीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेन्टमा समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ तर यद्यपि, चेतनाको अभावका कारण गाउँघरमा अधि:कांशले सिस्नो खाँदैनन् ।
सिस्नोको धुलो:लाई दाल र सुप बनाएरस:मेत खान सकिन्छ । हरियो सिस्नोको मुन्टा टिपेर तरकारीको रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । औषधीय गुण९सिस्नोमा पाइने फला’मले महिलामा रक्त’अल्पता र कमजोरी हुनबाट जोगाउँछ ।
सिस्नोले धेरै किसि:मको रोगको उपचार गरेको हुन्छ । विशेष गरेर मुटु तथा मधुमेह:सम्बन्धी रोगका लागि यो निकै नै लाभ’दायिक मानिन्छ । किड्नीको समस्या हुनबाट जोगा:उन सघाउँछ । यसले शरीरमा एलर्जी हुनेहरूका लागि धेरै राम्रो काम गरेको हुन्छ ।
पिसाब संक्रमण हुनेह:रूका लागि पनि सिस्नु खानाले धेरै फाइदा गर्छ कपाल सिल्की बनाउनुका साथै झर्नबाट रोकिन्छ । नयाँ रगत बन्नका लागि पनि सिस्नुले धेरै भूमिका खेले:को हुन्छ । सिस्नोको लेदोलाई मेहन्दी बनाएर कपा:लमा लगा:उँदा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ ।
त्यस्तै भाँचिएको तथा मर्केमा, हाड जोड्न, हाड–जोर्नी दुखेकोमा पनि सिस्नो उप’योगी मानिन्छ ।यसमा करिब २५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । यसमा आइरनसमेत पाइन्छ । सिस्नोमा फाइब’रसमेत हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग गर्छ ।
Prevर्‍यापर भिटेनलाई कार’बाही गर्न प्र’हरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन
Nextआज कुन राशिलाई कति सुभ कति अशुभ ? हेर्नुहोस् आज शुक्रबारको राशिफल
मन्दिरको ढोका नजिक बसेको कुकुरले दर्शन गर्न आउने सबैलाई आशीर्वाद दिन्छ, हात मिलाउँछ (भिडियो)
हेर्नुहोस्: पेट मिची’मिची हसाउने ‘सक्किगोनि’ को २७ औं नयाँ भाग ( भिडियो)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50809)